Rugby: hanomantena any Frantsa ny Makis vehivavy | NewsMada
Rugby: hanomantena any Frantsa ny Makis vehivavy
Nambaran-dRakotomalala Marcel, filohan’ny Malagasy rugby fa taorian’ny fanatrehany ny fivoriamben’ny federasiona iraisam-pirenen’ny rugby na ny world rugby, sy ny famaranana ny fiadiana ny ho tompondaka eran-tany, dia nihaona tamin’i Bernard Laporte, filohan’ny federasiona frantsay, ny tenany. Tamin’izany no nahalalana fa hanoman-tena any amin’ny ivontoerana ao Marcoussis, any Frantsa, ny Makis vehivavy, mialoha ny hiatrehany ny “repêchage”, ny volana febroary 2020. Haharitra eo amin’ny 10 andro eo izany, fanomanantena, izany.
Ankoatra izay, hisy fifanaraham-piaraha-miasa eo amin’ny federasiona roa tonta, hifanakalozana traikefa eo amin’ny fifaninanana sy fiofanana, ka mety hisy ihany koa teknisianina malagasy, hiofana any Frantsa, amin’ny taona ho avy . Handrato lalao firahalahiana any amin’ireo fiombonamben’ireo tany miteny frantsay, koa ny Makis de Madagascar.
Ampitoviana ny rehetra
Nisy koa ny fihaonan’ny filohan’ny Malagasy rugby, tamin’ny tompon’andraikitry ny fanatanjahantena ao amin’ny masoivohon’ny minisiteran’ny raharaham-bahiny, ka niresahana mahakasika ny “visa de circulation”-ny.
Mikasika ny fivoriamben’ny world rugby indray fantatra fa notakian’ireo mpikambana ny hampitoviana ny zavatra rehetra zaraina, fa tsy asiana tombo sy ala. Anisan’ireny, ny famatsiam-bola eo amin’ny fiofanana, saingy ny totaliny no samihafa, arakaraka ny laharana misy ireo firenena. Hodinihina mandritra ny fivoriambe tsy ara-potoana, hatao ny volana mey 2020, izany.
Farany, nanantitrantitra Rakotomalala Marcel fa tokony haverina ny soatoavina malagasy dia ny fahendrena sy ny fihavanana ary ny firaisankina, ho an’ny fandrosoana. Fakan-tahaka ny nataon’ny Japoney, nandritra ny “Mondial 2020”, teo iny, araka ny voalazany.